MassiveImpact: Mari Yekuita Nemaito Mobile Ad Network | Martech Zone
MassiveImpact: Iyo Mari Yekuita Nemaito Mobile Ad Network
Muvhuro, April 14, 2014 Mugovera, January 14, 2017 Douglas Karr
Maonero, maonero, kudzvanya… ndinoshamisika zvakanyanya kuti sei tichiri kuyera nekushambadza zvichibva pamametric aya. MassiveImpact inhare yeshambadziro yekushambadzira inosvika vanopfuura bhiriyoni vanoshandisa nharembozha kubva munyika zana negumi uye havadaro. Ivo vanoshandisa CPA, kana mutengo wechiito, kuona kwavo kushambadzira mitengo. Ndizvozvo ... iwe unobhadhara chete kana paine shanduko chaiyo! Izvi zvinoreva kuti kudzoka kwako mukudyara kunovimbiswa.
MassiveImpact inopa a 2-tier nhare yekushambadzira modhi, uchishandisa iyo MassiveImpact Chiitiko Tracker:
Mutengo Pakuiswa (CPI) - bhadhara sevashandisi vatsva kuisa yako app (yakatemwa modhi)
Post-yekumisikidza chiitiko - Iva neMassiveImpact inokurudzira zvigadzirwa zvako uye ubhadhare se
vatengi vako vanozvitenga, mukati meapp (modhi yemugove yemari)
MassiveImpact inopa vanogadzira maapps uye vaparidzi vesaiti mbozhanhare neagumo-kumagumo chikuva, ichitsigira izere lifecycle kubva kushambadzira kushambadzira, yakanangana neshure-kumagumo maitiro ekuteedzera uye analytics, zvichikonzera kuwanda kwekuita mari, kuwanikwa kweapp uye kushandiswa kwevashandisi. MassiveImpact proprietary optimization algorithms akagadzirwa chaizvo kune ekushambadzira nhare yekushambadzira nhandare.
MassiveImpact's chaiyo nguva yekuita (RTP) chikuva chinoita kuti vashambadziri vawane vatengi vatsva vane ROI yakavimbiswa. Iyo yekuvandudza inowanikwa ne patent-yakamirira vatengi nzira yekutsvaga, zvichibva pane chaiyo mushandisi nhoroondo yekutendeuka. Iko kusanganiswa kweMassiveImpact's RTP nzira uye TargetAdLive®'s otomatiki manejimendi ekushambadzira hesheni inobvumidza chaiyo-nguva, yekupedzisira-kusvika-kumagumo kushambadzira kushandira kutenderera.
TargetAdLive® ndiyo MassiveImpact's yepamoyo tekinoroji mhinduro. Iyo algorithm-yakavakirwa kushambadzira tekinoroji, TargetAdLive® inoshandiswa neiyo MassiveImpact timu kuti iite yayo yekuita-yakavakirwa nhare yekushambadzira kushambadzira. Nepo echinyakare nhare yekushambadzira mhinduro inotarisa kune yakajairwa nhare yekushambadzira- based profiling nzira dzinowanzo hanya 98% yedata iripo; TargetAdLive® inoshandisa rese riripo data kuyera mukana wega wega wemushandisi wekutenga chimwe chigadzirwa.
TargetAdLive®, inoongorora muyenzaniso wevatakuri ', vaparidzi' kana isina waya sevhisi vanopa 'data yevatengi ine data yakapihwa pane yevanoshambadzira. Inosarudza, munguva chaiyo, kushambadza uko kunogona kuona mhedzisiro uye nekugadzira mari yakawanda. TargetAdLive® ipapo inowirirana nharembozha nevatengi vanogona kuita chiito chaunoda, zvichibva pane rese mushandisi dhata rakaunganidzwa, inokwana chimiro chemushandisi uye zvemukati zveshambadziro uye inoshandira inoenderana kushambadza.
Tags: mutengo pakuiswamikurunharembozha yekushambadzirakurodha pasi mbozhanharepost-yekumisikidza chiitikochaiyo nguva yekuitaTargetAdLive
Inbound Call Channel yakakura… uye Isina Kubatwa
PayStand: Gamuchira Kiredhiti Kadhi pasina Mari Yekutengesa